fahasalamana Archives - Book News Madagascar
Mahatratra 788 ireo voan’ny androbe noraisin’ny tetikasa Anjaratsara an-tanana nandritra ny telo taona. Fandraisana an-tànana ireo voan’ny androbe Mbola sarotra ny fitsaboana ny aretina androbe eto amintsika. Antony maro no mahatonga izany toa tsy ny fahafahan’ireo marary mividy fanafody hitsaboana ny tena. Maharitra dimy taona eo ny fitsaboana ny aretina Read more…
Mbola avo ny salan’isan’ny Malagasy mety ho voan’ny bilarziozy. Ny tsy fahalalana madio no tena mahatonga izany. Mety hahavoa olona maro ny bilarziozy Araka ny fikarohana nataon’ny mpikaroka Malagasy momban’ny aretina bilarziozy dia 90%-n’ny Malagasy ao anatin’ny distrika 107 no mety ho voan’ny aretina bilarziozy. Nilaza ny Profesora Rakotozandrindrainy Raphaël Read more…
Sekoly katolika: niditra nianatra, samy nandray ireo fepetra nifanandrify taminy
Niditra nianatra androany ireo sekoly katolika eto Antananarivo, araka ny fanambarana navoakan’ny Didec ny Alatsinainy lasa teo. Samy nandray ny fepetra hitany fa nety tamin’izy ireo sy tamin’ireo Ray aman-drenin’ny mpianatra teny anivon’ireo sekoly ireo tompon’andraikitra. Araka izany, misy ireo sekoly katolika izay niditra androany, saingy mbola tapak’andro ihany aloha Read more…
Hiditra hianatra rahampitso ny sekoly katolika
Hiverina an-dakilasy rahampitso ireo sekoly katolika, araka ny fanambarana navoakan’ny Didec. Tapaka ny hevitra fa haverina an-dakilasy ireo mpianatra satria efa nisy ny fifampiresahana teo amin’ireo talen-tsekoly sy ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny ministeran’ny Fahasalamana. Nisy ny fampiofanana sy fampahafantarana ireo Talen-tsekoly katolika rehetra manerana ny Diosezin’ Antananarivo mikasika ny Read more…
By Book News, 3 years ago